ယရှေုသညျထလျှင်အရေးကြီးပါသလား? — ခရီးစဉ်လီ - တရားဝင် SITE ကို
ငါသည်ငါ့မိသားစုအီစတာပေါင်းသည်တလုံးမှထွက်သွားလိမ့်တက်ကြီးထွားလာသတိရ. ကျနော်တို့ရက်သတ္တပတ်ရှေ့တော်၌ထိုကုန်တိုက်ကိုသွားနှင့်အီစတာ Bunny နှင့်အတူရုပ်ပုံယူချင်ပါတယ်. ငါပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရသောသူအပေါင်းတို့သည်အားလပ်ရက် mascots ၏ creepiest ဖြစ်ပါတယ်ထင်. တစ်ဦးကအလွန်ကြီးမားသောယုန်? ဒါကသားသမီးတို့အဘို့ traumatizing င်. မသာကြောင်း, သင်မူကား, သူကတနင်္ဂနွေကျော်သငျ့အိမျမှာထပြသသွားမယ့်ကပြောကြားပါတယ်? ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အီစတာအပေါ်, ကျနော်တို့ဘုရားကျောင်းသွားချင်ပါတယ်, ပြီးတော့ကျွန်တော်အိမ်ပြန်လာချင်ပါတယ်. ကျနော်တို့ဟာအီစတာကြက်ဥအမဲလိုက်ခြင်းပြုပါချင်ပါတယ်. ကျနော်တို့မိသားစုကျော်ရှိချင်ပါတယ်. ကျနော်တို့အဲဒီမှာအတွက်ပစ္စည်းပစ္စယများအားလုံးကြင်နာအတူနည်းနည်းအီစတာခြင်းတောင်းများချင်ပါတယ်.
ထိုအခါငါတို့တှငျအများတို့သည်လည်းအလားတူအဖြစ်အပျက်များရှိ. အကြှနျုပျ၏ Non-ခရစ်ယာန်မိတ်ဆွေများပင်အလွန်ဆင်တူပုံပြင်များရှိ. ဤအရာအားလုံးသည်ကျွန်တော်တို့ယေရှု၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းပွဲကျင်းပနောက်ကွယ်မှတစ်နည်းနည်းနဲ့သိတဲ့ယဉ်ကျေးမှု၌တက်ကြီးထွားလာပြီ, ဒါပေမဲ့အများအပြားကပွဲကျင်းပဘို့တကယ်ကိုမလိုအပ်ပါဘူးင်.
ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ဖြေဆိုရန်တောင်းနှင့်ကြိုးပမ်းနေတဲ့မေးခွန်းဖြစ်ပါတယ်: ယရှေုသညျကယ့်ကိုသင်္ချိုင်းကနေကြီးပြင်းလျှင်အရေးပါသလား? သငျသညျဘူးကဘာလဲဆိုတာအားလုံးအီစတာကြက်ဥ Hunt ရှိပါလျှင်၏သင်တန်းကအရေးမထားဘူး. ဒါကယေရှုနှင့်အတူလုပ်ဖို့လုံးဝဘာမျှမရှိတယ်. ဒါပေမယ့်ငါတို့ရှိသမျှသည်အသက်၏ထွက်ကြောင်းထက်ပိုချင်. ငါသည်ဤဟာအလွန်သက်ဆိုင်ရာမေးခွန်းဖြစ်ပါတယ်ထင်, ငါကအနည်းငယ်အကြောင်းပြချက်များအတွက်မေးမြန်းဖို့အရေးကြီးပါတယ်ထင်.
1, တချို့ကကအစဉ်အဆက်ဖြစ်ပျက်မစဉ်းစားကြဘူး. ကျွန်တော်တို့ကိုအတော်များများမဖြစ်နိုင်ဘူးဖြစ်သေသောနောက်လူသားတစ်ဦးဖြစ်လျက်ရှိ၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုစဉ်းစား. စိတ်နှလုံးကိုကိုရပ်တန့်လိုက်တဲ့အခါ, ရှိခဲ့ပါတယ်ခံရဖို့ကိုနောက်တဖန်မဘဝရှိပါတယ်. အလောင်းတွေကိုထပ်မသွားရကြဘူး. ကျနော်တို့ကတစ်ခါမှမမြင်ခဲ့ပါဘူး, ကသဘာဝတရား၏ဥပဒေများနှင့်ကိုက်ညီမှမထင်ထားဘူး, အများအပြားကဖြစ်ပျက်မယုံကြည်မှုခံစားရ. ဒါကြောင့်ဒီအကြောင်းစဉ်းစားရန်အရေးကြီးပါသည်.
2, ကျွန်တော်တို့ကိုအခြားသူများဆီလျှော်အဖြစ်ကစဉ်းစား. ကျနော်တို့ကအကြောင်းအလွန်အကျွံဖြစ်စေလမ်းမစဉ်းစားကြဘူး. ဒီတစ်ခါလည်းသူကိုပြု, ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူမကိုပြု. မှာအားလုံးငါ့အသက်ကိုနှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်ကြပါဘူး. ဒီတစ်ခါလည်းငါနောက်ပိုင်းမှာငါ့အသက်ကိုအပေါ်တစ်ချိန်ချိန်ယေရှုအားအာရုံစိုက်ပါလိမ့်မယ်, ယခုမူကားအဘို့ငါကောင်းသောရယ်. ငါပျော်စရာရှိခြင်းတာပါ, ငါအသစ်သောအရာနှင့်ထိတွေ့ခံရတာပါ, ငါသင်ယူတာပါ, ငါသည်တအခြေခံအုတ်မြစ်တစ်ခုသို့မဟုတ်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းတည်ဆောက်ဖို့ကြိုးစားနေတာပါ. ငါအခုရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းအကြောင်းကိုတကယ်စိုးရိမ်မရယ်. သို့သော်ထိုရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းဘယ်သူ့ကိုမှအဘို့ဆီလျှော်သည်မဟုတ်. ထိုအခါငါကယနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆွေးနွေးမှုကာလအတွင်းကြောင်းသက်သေပြဖို့ကဘာလဲဆိုတာ.
3, ကျွန်တော်တို့ကိုတချို့ကပဲတကယ်ကိုလှုံဆော်အားပေးအဖြစ်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းဇာတ်လမ်းစဉ်းစား. ဒါဟာသင့်ရဲ့အခွအေနအထက်မြင့်တက်နေတဲ့သင်္ကေတရဲ့. ဒါဟာနောက်ဆုံးကျော်ကလူရဲ့စိတျနှလုံးကိုသိမ်းပိုက်ရဲ့လှပတဲ့ဇာတ်လမ်းရဲ့ 2000 အနှစ်. ဇာတ်လမ်းတစ်ခုကိုယ်ကျင့်တရားဒီတစ်ခါလည်းရှိပါတယ်, ထက်ဒါပေမဲ့ဘာမျှမကပို.
သူတို့အားအမြင်များအပေါငျးတို့သညျသုံးကမျြးစာကိုယေရှု၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းအကြောင်းကိုသွန်သင်ရာထက်ကွဲပြားခြားနားသောကြောင့်ငါသည်ဤအကြောင်းကိုပြောပြရန်အရေးကြီးသည်ထင်အကြောင်းရင်းဖြစ်ပါသည်. ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကို၏ဤမျှလောက်များစွာသောကမျြးစာကိုအကြှနျုပျတို့ကိစ္စရပ်များကြောင့်ဖြစ်စေမကိုယျ့ကိုယျကိုမေးမြန်းသင့်ပါတယ်မထက်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းအကြောင်းကိုကွဲပြားခြားနားသောအမှုအရာထင်လျှင်. အီစတာရာသီကဒီဆွေးနွေးမှုရှိသည်ဖို့အလွန်ကြီးစွာသောအခွင့်အလမ်းဖြစ်ပါသည်.
ဒီကျနော်တို့ထမြောက်ခြင်းဘယ်လိုရှုမြင်တယ်ဆိုတာကိုသည်ဆိုပါကထိုအဖြေကိုအဘယ်သူမျှမသည်, ကအရေးမထားဘူး. သင်တို့မူကားပြီးသားမှန်းဆကြပြီမဟုတ်လျှင်, ငါခရစ်ယာန်တစ်ဦးပေါ့ငါသညျယရှေုကိုအမှန်တကယ်သင်္ချိုင်းတွင်းထဲကတက်ရတယ်ထင်. ထိုမျှမကသာအရေးပါငါထင်ကြဘူး, ကျနော်တို့ကမပါဘဲအားလုံးကူကယ်ရာမဲ့ထင်ပါတယ်.
ငါသညျယရှေုကိုသေခြင်းမှထမြောက်စေတော်ယုံကြည်ဘယ်ကြောင့်ခေတ္တသင်ပြောပြချင်. အဲဒီအပေါ်အချိန်တစ်တစ်တန်ဖြုန်းဖို့မဟုတ်ပါဘူးတာပါ, သောကွောငျ့သောဤဆွေးနွေးချက်၏ရည်ရွယ်ချက်မဟုတ်ပါဘူး. အဆိုပါရည်ရွယ်ချက်ယနေ့ညကအရေးပါပါတယ်ဖြစ်စေမအကြောင်းပြောဆိုရန်ဖြစ်ပါသည်, ငါမူကားသူအမှန်တကယ်မြင့်တက်ကြောင်းအပြင်းအထန်တောင်းဆိုဖို့နှင့်တောင်းဆိုမှုများကြောင့်အပေါ်အခြေခံပြီးလုပ်ပါမယ်လျှင်, ငါသည်သင်တို့ကိုငါယုံကြည်ရတဲ့အကြောင်းရင်းသိလို.
သငျသညျကမျြးစာကိုဖတ်ရတဲ့အခါ, တမန်တော်ဆိုတဲ့အချက်ကိုထက်လျော့နည်းဘာမှအဖြစ်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းပြုမူဆက်ဆံကြပါဘူး. သူတို့ဒဏ္ဍာရီရေးသားခြင်းခံရဖို့မိမိတို့ကိုယ်ကိုစဉ်းစားကြဘူးကြောင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းဒါဟာင်. ယရှေုသညျကောငျးကငျဘုံသို့တက်ပြီးနောက်တမန်တော်တရားဒေသနာကိုဟောပွောရတဲ့အခါ, သူတို့သညျယရှေု၏အသေခံခြင်း၏စကားပြောဆို (လုပ်ခဲ့သည်ဟုသော) နှင့်အတူတူပင်အင်အားစုနှင့်အတူယေရှု၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်း. နှစ်ဦးစလုံးဖြစ်ရပ်မှန်များလျှင်အဖြစ်.
ကျမ်းစာ၌ပါသညျယရှေုစာသားသေခြင်းမှထမြောက်ကြောင်းရှင်းပါတယ်. ထိုအခါငါကျမ်းစာ၌ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်ယုံကြည်. ငါကယုံကြည်စိတ်ချနိုင်ပါတယ်ယုံကြည်. ငါကတည်ရှိသည်သို့မဟုတ်မှားသည်မစဉ်းစားကြဘူး. ထိုအကမျြးစာလာမယ့်လမ်းကိုသငျသညျ up ပြုလုပ်ဖန်ဆင်းခဲ့လျှင်သင်ရေးထားမယ်လို့ဘယ်လောက်မဟုတ်ပါဘူး. ဘယ်ငါသည်ထမြောက်ခြင်းအကြောင်းဖြစ်ပျက်ယုံကြည်ဒုတိယအကြောင်းပြချက်မှငါ့ကိုအဆောင်တတ်၏.
ကြှနျုပျတို့အားလုံးအခြားသူများထံမှသက်သေခံချက်အပေါ် အခြေခံ. အမှုအရာကိုလက်ခံ. ကျနော်တို့ကဘတ်စကက်ဘောဒီဂိမ်းမှာမဟုတ်ကြ, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ပြန်လည်စုစည်းမှုရှိခဲ့သည်သူကိုအားကစားညောသို့မဟုတ်မိတ်ဆွေများကယုံကြည်စိတ်ချ. သငျသညျရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသက်သေအထောက်အထားမလိုအပ်ပါဘူး. သူတို့ကိုသင်ယုံကြည်စိတ်ချ. ကျနော်တို့အတန်းအစားလွဲချော်, ငါတို့မူကားသူတို့၏မှတ်စုများကိုအပေါ်သွားအတန်းဖော်ယုံကြည်စိတ်ချ. ကျနော်တို့ Gettysburg လိပ်စာမှာမဟုတ်ကြ, ကျမတို့ကလည်းဘယ်ဗီဒီယိုဖိုင်ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူး, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ကဖြစ်ပျက်ကြောင်းယုံကြည်စိတ်ချ. ကျနော်တို့အဲဒီစကားသည်အာဗြဟံလင်ကွန်း၏သူတို့အားဖြစ်ကြောင်းယုံကြည်စိတ်ချ.
ယခုငါသည်ဤအမှုအရာထမြောက်ခြင်းထက်ကွဲပြားခြားနားသိ, ငါမူကားဆိုသည်ဟုဆို, ကျွန်တော်တစ်ဦးယုံကြည်စိတ်ချရသောအရင်းအမြစ်ကနေအကြောင်းကြားသိသောကြောင့်ကျနော်တို့ဖြစ်ပျက်ယုံကြည်ကြောင်းဖြစ်ရပ်များရှိပါတယ်. ဒါကြောင့်ပါမည်ဖို့မလိုပါလျှင်ထိုသို့ပြုမှသဘာဝနှင့်ပညာရှိအရာပါပဲ.
ကျမ်းစာထဲမှာရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းအကြောင်းပြောဆိုလာသောလူများ, အဖြစ်ဝေးကျနော်ပြောနိုင်ကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏, ယုံကြည်စိတ်ချရသောမျက်မြင်သက်သေများ. ငါ့ကိုသူတို့ကိုပါမည်ရန်အဘို့အဘယ်သူမျှမအကြောင်းပြချက်ရှိပါတယ်. တကယ်တော့, ယရှေုသညျကိုမွငျလြှငျအဘယ်သူမျက်မြင်သက်သေများရာပေါင်းများစွာရှိကြ၏. ငါဘယ်မှာမဆိုတရားရုံး၏မစဉ်းစားနိုင် 500 မျက်မြင်သက်သေများတစ်ဦးအမှုသက်သေပြဖို့လုံလောက်တဲ့မဖြစ်လိမ့်မယ်. ငါသက်သေခံချက်လွှမ်းမိုးသောဖြစ်ပြီးယေရှုသည်သေခြင်းမှထမြောက်တော်မူရကြောင်းကိုယုံကြည်.
ခရစ်ယာန်ဘာသာရဲ့ start အရမ်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်. သငျသညျဂါလိလဲပွညျတှငျမှေးဖှားတဲ့ဂျူးလူကိုများ, အခွင့်အာဏာများအသစ်တစ်ခုကိုကြင်ကြင်နာနာနှင့်အတူဆုံးမဩဝါဒပေး. အံ့ဖွယ်အကျင့်ကိုကျင့်. နောက်လိုက်စုဆောင်း. ဂျူးအာဏာပိုင်များနှင့်အတူဒုက္ခအတွက်ရယူခြင်း. သူ၏အဆွေခင်ပွန်းအားဖြင့်စွန့်ပစ်ခံ. အသတ်ခံခံရ. ပြီးတော့သူ့အသင်္ချိုင်းအချည်းနှီးဖြစ်တွေ့နိုင်ပါတယ်.
ထိုအခါတစ်နည်းနည်းနဲ့ဤလူ, သူသည်ထိုအံ့သြဖွယ် things- အုပ်ချုပ်ပြုပါမယ်လို့ပြောပါတယ်, နန်းစံ, သူသေဆုံးသော်လည်းသုံး days- အတွက်ဗိမာနျတျောကိုပြန်လည်တည်ဆောက်တဲ့လှုပ်ရှားမှုများ၏အရင်းအမြစ်ဖြစ်လာ. တပည့်သူ့ကိုစွန့်ပစ်. သူတို့အချည်းနှီးသညျလိုကျတူကကြည့်ရှုသောကွောငျ့သူတို့ကြောက်လန့်ခြင်းနှင့်တား. ထိုအခါမူကားကျွန်ုပ်တို့တမန်တော်များ၏စာအုပ်ဖတ်ရသောအခါ, ကျွန်တော်သူတို့တစ်တွေရုတ်တရက်အားပေးမှုနဲ့ရဲရင့်၌ရှိသမျှသောအနေဖြင့်သိမြင်. ယရှေုသညျအဘို့အညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုနှင့်ရင်ဆိုင်ရဖို့ဆန္ဒရှိ.
သူတို့ဟာသူသညျဘုရားသခငျရဲ့သွန်သင်, ဂျူးယဉ်ကျေးမှု, အဘယ်သူသည်ဘုရားသခင်တဆူတည်းကအသိအမှတ်ပြု. သူတို့ကသူသည်သင်္ချိုင်းမှထမြောက်သင်ပေး, ထိုသို့ဖြစ်ပျက်ပြီးနောက်ကြပြီးမကြာမီကသင်ပေး. ဒါကြောင့်လူတွေကပတ်ပတ်လည်နေဆဲ. ထိုသို့ဖြစ်ပျက်ဘူးဆိုရငျ, ဒါကြောင့်ရသည်ဟုမည်ဖြစ်ကြောင်း. အဆိုပါအာဏာပိုင်များတပြင်လုံးကိုခွအေနအေပိတ်ပစ်နိုင်, သောသူတို့အားခြိမ်းခြောက်ခဲ့သည်, ကိုယ့်လူသူ့ခန္ဓာကိုယ်ဖေါ်ပြခြင်းဖြင့်အသုံးပြုပုံ. အဆိုပါလှုပ်ရှားမှုကြီးထွားလာ, ယေရှု၏နောက်လိုက်များမြောက်မြားစွာရှိပါတယ်. ထောင်နှင့်ချီသောအလွန်မကြာမီပြီးနောက်. အားလုံးဒါပေမဲ့အဲဒီတဆယ်နှစ်လုံးကိုတပည့်တဦး, ခရစ်တော်အတွက်သူတို့၏ယုံကွညျခွငျးကိုအဘို့အအသတ်ခံရခံရတက်အဆုံးသတ်. ဤသူသည်အဘို့အအသတ်ခံရ. သူတို့ကဒါသေချာပါခဲ့ကြ, သူကဘုရားသခင်၏သားတော်ဆိုတဲ့အချက်ကိုမှကျူးလွန်, သူတို့ကအဘို့အဦးသေဆုံးခဲ့သည်သောသေခြင်းမှထမြောက်တော်မူ.
သငျသညျကိုဘယ်လိုရှင်းပြကြပါ? အဲဒီအချက်အလက်တွေရဲ့အကောင်းဆုံးရှင်းပြချက်ထင်, သူကတကယ်တော့သင်္ချိုင်းကနေမြင့်တက်ခဲ့သည်. ငါတက်ဖွဲ့သောဒဏ္ဍာရီအဘို့အသေမခံရဘဲမယ်လို့သိ. ဤလူအပေါင်းတို့ကိုစည်းရုံးသိမ်းသွင်းနိုင်သည့်တစ်ခုတည်းသောအရာ, သူကတကယ်တော့ထသောကွောငျ့ဖွစျသညျ.
ထိုအချိန်ကာလ၏ကျန်များအတွက်ဒါ, သို့ဖြစ်. ထိုမေးခွန်းကိုအကြောင်းပြောဆိုလိမ့်မယ်. ယရှေုသညျသင်ျခြိုငျးကနေကြီးပြင်းလျှင်အရေးပါသလား. ငါကအရေးပါထင်အဘယ်ကြောင့်သင်တို့ကိုငါပြောပြသွားတာပါ. ငါကျမ်းစာထဲကတစ်ဦးကျမ်းပိုဒ်မှာကြည့်ခြင်းအားဖြင့်ထိုသို့ပြုမှသွားတာပါ, 1 ကောရိန္သု 15. ထိုကျမ်းပိုဒ်ကနေ, ငါသည်သင်တို့ကိုရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်း၏သုံးသက်ရောက်မှုတွေကိုပြသသွားတာပါ.
တွင် 1 ကောရိန္သု 15, ပေါလုကိုမသာတဲ့သမိုင်းဆိုင်ရာအချက်အဖြစ်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းဆကျဆံ, ဒါပေမယ့်သက်ရောက်မှုတွေဘဝနှင့်သေခြင်းတွေဟာင်လျှင်အဖြစ်.
ဤသုံးပါးအကြောင်းပြချက်ကဒီအခန်းထဲမှာကျွန်တော်တို့ကိုအမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှတစ်ခုတည်းတယောက်အတွက်အလွန်အရေးကြီးလှသည်. သူတို့ကအသကျရှငျတိုင်းတစ်ခုတည်းလူတစ်ဦးသည်အအရေးကြီးတယ်. ငါယုံကြည်အဘယ်ကြောင့်တဖန်သင်တို့ခဏအတွက်မြင်ရပါလိမ့်မယ်. ဤတွင်ရှင်ပေါလုမိန့်င်:
သို့သော်ထိုအသေကောင်များထမြောက်ရှင်ပြန်ခြင်းမရှိလျှင်, ထို့နောက်ပင်ခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူပြီမဟုတ်. ထိုအခါခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မမူလျှင်, ထို့နောက်ငါတို့ဟောပြောခြင်းအမှုသည်အချည်းနှီးဖြစ်ပါတယ်နှင့်သင်၏ယုံကြည်ခြင်းကိုအချည်းနှီးဖြစ်ပါတယ်. ကျွန်တော်ပင်ဘုရားသခင့လွဲဖော်ပြခံရဖို့ကိုတွေ့နေကြပါတယ်, ကျွန်တော်တို့ကသူခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူသောဘုရားသခင်ကိုအကြောင်းကိုသက်သေခံသောကြောင့်,, ဒါကြောင့်အသေကြီးပြင်းကြသည်မဟုတ်မှန်ပါလျှင်သူပြုစုပျိုးထောင်ဘဲဘယ်သူကို. သေလွန်သောသူတို့သည်ထမြောက်တော်မူကြသည်မဟုတ်လျှင်, မပင်ခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူပြီ. ထိုအခါခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မမူလျှင်, သင်တို့၏ယုံကြည်ခြင်းကိုအချည်းနှီးဖြစ်ပါတယ်သင်သည်သင်၏အပြစ်၌နေဆဲ. ထိုအခါလည်းခရစ်တော်၌အိပ်ပျော်သောသူတို့သည်ဆုံးရှုံးခြင်းသို့ရောက်ကြပြီ. ခရစ်တော်အတွက်သာယခုဘဝ၌မြော်လင့်စရာရှိလျှင်, ငါတို့ရှိသမျှသည်လူအများမှာအများဆုံးသနားခံရဖို့.
(1 ကောရိန္သု 15:13-19 တော်မူ၏)
ငါ. ယရှေုသညျမွောကျစမပြုခဲ့ အကယ်., အဘယ်သူမျှမဧဝံရှိပါတယ်
ငါဆိုတာဘာကိုဆိုလိုတာလဲ? ၏သင်တန်းကိုကျွန်တော်တို့တခါတရံဤနေရာတွင်ကောင်းသောဖြစ်ကြောင်းသတင်းများတွင်အမှုအရာရှိပါတယ်. သို့သော်လည်းငါသည်အဆုံးစွန်သတင်းကောင်းကိုဆိုလို, ဘာကျမ်းစာဧဝံဂေလိတရားကိုခေါ်. အဆိုပါအမှန်တရား, သတင်းအတွက်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာ၌ဖြစ်ပျက်သောသူအချို့ကောင်းသောအရာရှိပါသည်ပင်သော်လည်း, ခဏမျှော်လင့်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုပေးနိုငျကွောငျးပင်အမှုအရာ, သူတို့အမှုအရာတို့ကိုသူတို့အားအဘယ်သူအားမျှကိုတည်မြဲမျှော်လင့်ချက်ပေးနိုင်ပါသည်.
တစ်ဦးကအခွန်ပြန်အမ်းငွေစစ်ဆေးမှုများကျွန်တော်တို့ကိုရေရှည်တည်တံ့မျှော်လင့်ချက်မပေးနိုင်. တစ်ဘွဲ့ရအစီအစဉ်သို့လက်ခံမှုမျှော်လင့်ချက်တည်တံ့ YS အားမပေးနိုငျ. တစ်ဦးထိတွေ့ဆက်ဆံမှုသို့မဟုတ်လက်ထပ်ထိမ်းမြား, ကျွန်တော်တို့ကိုရေရှည်တည်တံ့မျှော်လင့်ချက်မပေးနိုင်. ဤအရာအားလုံးသည်တစ်ဦးဆုံးရှုံးခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်. ထိုသူတို့ကခဏအတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုထဲကနှုတ်နိုင်ပါသည်. ကြာဆိုမြော်လင့်စရာရှိ၏? တစ်လောကလုံးနှင့်ခမ်းနားရဲ့မည်သည့်မျှော်လင့်ချက်ရှိပါသလား?
ကမျြးစာကကျွန်တော်တို့ရဲ့ကမ္ဘာ၏ပြည်နယ်အကြောင်းကိုအလွန်လက်တွေ့ကျနဲ့ရိုးသားဖြစ်ပါသည်. ကျနော်တို့ကျိုးကြ, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကမ္ဘာကြီးကျိုးသည်, နှင့်ဖန်ဆင်းခြင်းအားလုံးပွနျလညျထူထောငျရနျလိုအပျ. ကျနော်တို့သိကျွန်တော်တို့ရဲ့ကမ္ဘာကြီးကျိုးသည်. သဘာဝဘေးဒဏ်ကနေရောဂါ. ထိုအရာဇဝတ်မှု. အသစ်တစ်ခုကိုအစုလိုက်အပြုံလိုက်သေနတ်ပစ်နေ့တိုင်းယခုရှိတယ်တူဒါဟာပုံရသည်. ဘာဖြစ်နေတာလဲ? ကျိုးပဲ့သော.
ဒါဟာသော်လည်းထွက်ရှိရုံမဟုတ်ဘူး. ငါတို့ရှိသမျှသည်လည်းကျိုးကြ. ကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာ၌ဤများ၏အထောက်အထားကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များသည်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိုးရိမ်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျိုးပဲ့ဆက်ဆံရေး, အချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်နှင့်အတူပဋိပက္ခ, အားလုံးနှင့်အဆိုးဆုံး, ဘုရားသခင်ထံမှကျွန်တော်တို့ရဲ့ခွဲခြာ.
သငျသညျအစဉျအမွဲငါတို့သည်ဖြစ်ကြ၏လမ်းဖြစ်ကြောင်းအဘယ်ကြောင့်စဉ်းစားဖူး? ငါတို့သည်စုံလင်သောမဖွစျနိုငျကြိုးစားကြည့်ပါဘယ်လောက်ခက်ခဲအဘယ်ကြောင့်အဘယ်သူမျှမကိစ္စ? ငါတို့သည်ပြုပါအကျင့်တို့ကိုကျင့်အဘယ်ကြောင့်? ကျွန်တော်တို့နောက်ကျောကျွန်တော်တို့ကိုနာကျင်စောင့်ရှောက်သောအမှုအရာမှမသွားစောင့်ထားအဘယ်ကြောင့်? ကျွန်တော်တို့အဖျက်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေလုပ်အဘယ်ကြောင့်? ငါတို့သည်အဘယ်ကြောင့်အခြားသူများကိုထိခိုက်စေ? ကျနော်တို့ကျိုးပဲ့နေ. ဒါကမကောင်းတဲ့သတင်းင်.
ယရှေုသညျဘုရားသခငျသညျ restore ကိုစလှေတျတျောမူသောတစ်ခုမှာဖြစ်ပါတယ်, နှင့်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖန်ဆင်းရှင်မှကျွန်တော်တို့ကို restore ရန်. ဒါကသတင်းကောင်းင်.
ခရစ်ယာန်ဘာသာကမ္ဘာ့ဘာသာတရားတို့တွင်ထူးခြားသောကြောင်းသံသယရှိစရာမလိုပါင်. ခရစ်ယာန်ဘာသာအကြောင်းကိုထူးခြားသောအမှုအရာတစျခုကတစ်မူထူးခြားသောလမ်းအတွက်သမိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်ရပ်များအပေါ်အခြေခံပြီးင်ဖြစ်ပါတယ်. တကယ်တော့ကျနော်တို့ကိုကိုးစားကြောင်းဖြစ်ပျက်ခဲ့ကြောင်းအရာအခြို့ရှိပါတယ်. ကျနော်တို့တစ်ကယ့်လူကိုယုံကြည်စိတ်ချ, အဘယ်သူသည်အမှန်တကယ်သေဆုံးခဲ့ရသည်, သူကတကယ်တော့သေခြင်းမှထမြောက်စေ. ထိုအမှုအရာစစ်မှန်တဲ့မဟုတ်လျှင်, ထို့နောက်တစ်ဦးကယ်တင်ရှင်အကြောင်းကိုဧဝံစစ်မှန်တဲ့မဟုတ်ပါဘူး.
မိုဟာမက်အစ္စလာမ့်ယုံကြည်ခြင်း၌ပရောဖက်သည်, အသေဖြစ်၏. သူ့ခန္ဓာကိုယ်နှင့်သူ၏သင်္ချိုင်းရှိရာမွတ်စလင်မ်များသိ. နှင့်ဤမျှလမ်းအတွက်တစ်ဦးမွတ်ဆလင်ရဲ့ယုံကွညျခွငျးကိုထိခိုက်.
ဗုဒ္ဓသေခံတော်မူပြီးနောက်မီးသဂြိုလ်ခဲ့သည်, နှင့်ကွဲပြားခြားနားမိသားစုများဖြန့်ဝေခဲ့ကြကြောင်းမီးသင်္ဂြိုဟ်ရှေးဟောင်းပစ္စည်းရှိပါတယ်. ဗုဒ္ဓရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာသည်အဘယ်မှာရှိဒါကြောင့်ငါတို့သိ. ထိုအလမ်းမရှိသောအတွင်းဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ယုံကွညျခွငျးကိုထိခိုက်ကြောင်း.
ကွန်ဖြူးရှပ် '' ခန်ဓာကိုယ်တရုတ်နိုင်ငံ၌သူ၏မွေးရပ်မြေအတွက်သင်္. အလားတူယောသပ်သည်စမစ်ကပြောသည်နိုင်, အမျိုးမျိုးသောပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးရဲ့, စသည်တို့ကို. ထိုလူမျှလမ်းအတွက်သေကြဆိုတဲ့အချက်ကိုသူတို့ရဲ့နောက်လိုက်၏ယုံကြည်ခြင်းကိုထိခိုက်.
သို့သော်တစ်စုံတစ်ဦးကိုယေရှု၏အသေကောင်ရှာတွေ့ခဲ့လျှင်, ခရစ်ယာန်ဘာသာတည်ရှိရန်တာတွေရပ်စဲ. ခရစ်ယာန်အသင်းတော်များကြိုးများမှာ. ခရစ်ယာန်တရားဟောဆရာမုသာဝါဒီများဖြစ်ကြသည်. ထိုအခရစ်တော်ရဲ့နောက်လိုက်ကူကယ်ရာမဲ့များမှာ. ၏သင်တန်းကိုသခင်ယေရှု၏အသေကောင်ကိုတွေ့ခံရဖို့တည်ရှိမယ်ဆိုရင်, အာဏာပိုင်များရုံလူအားဘာသာရေးဆည်းကပ်၏ပြန့်ပွား squash ဖို့လူကပြကြပြီ. သို့သော်လည်းငါသည်အောင်တာပါအမှတ်ကအရေးပါကြောင်း.
ရှင်ပေါလုသည်ဤအဘယ်သို့မိန့် Listen 1 ကောရိန္သု 15. အစောပိုင်းကသူအရေးအပါဆုံးအရာအဖြစ်ဧဝံဂေလိတရားကိုသို့မဟုတ်ဧဝံမှထောက်ပြ. သူကသူသည်ထိုသူတို့အားတရားကိုဟောပြောသောအရာကိုင်ကပြောပါတယ်, သူတို့ကလက်ခံရရှိ, သူတို့ကလက်ရှိကရပ်. ဒါပေမဲ့သူကျမ်းပိုဒ်အတွက်အဘယ်သို့မိန့် listen 14.
"ထိုအခါခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မမူလျှင်, ထို့နောက်ငါတို့ဟောပြောခြင်းအမှုသည်အချည်းနှီးဖြစ်ပါတယ်နှင့်သင်၏ယုံကြည်ခြင်းကိုအချည်းနှီးဖြစ်ပါတယ်. ကျွန်တော်ပင်ဘုရားသခင့လွဲဖော်ပြခံရဖို့ကိုတွေ့နေကြပါတယ်, ကျွန်တော်တို့ကသူခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူသောဘုရားသခင်ကိုအကြောင်းကိုသက်သေခံကြောင့်တည်း။ "
ပေါလုကရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းအချို့သောတကယ်ကိုလှုံဆော်အားပေးဇာတ်လမ်းဖြစ်ပါတယ်ထင်မထားဘူး. သူကကိုယုံကြည်ခြင်းကြောင့်အပေါ်အရင်းထင်. ဒါကြောင့်ငါတို့သည်အချို့သောတကယ်ကိုလှုံဆော်အားပေးပုံပြင်လိုပြုမူဆက်ဆံရသောအခါ, ငါတို့ကဲ့သို့ကောင်းစွာကြောင့်ခရစ်ယာန်ဘာသာရဲ့ဟန်ဆောင်ကိုရပ်တန့်စေခြင်းငှါ,. ငါတို့ကဲ့သို့ကောင်းစွာပင်သည်ကမျြးစာကိုမသုံးစေခြင်းငှါ,. ပေါလုကိုဆိုလိုသို့မဟုတ်ရည်ရွယ်သောအရာကိုမင့်. ထိုသို့ကြောင့်လမ်းဆက်ဆံဖို့သန့်ရှင်းသောစာသားတခုအလွဲသုံးမှုင်.
အဆိုပါခရစ်ယာန်ယုံကြည်ခြင်းသတင်းများအပေါ်အခြေခံသည်. ဒါဟာဘဝအကြောင်းကိုသတင်း၏ကွှေးကျွောခွငျးအပျေါအခွခေံင်, သေဆုံးခြင်း, ခရစ်တော်၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်း.
မှန်မဟုတ်ဘူး အကယ်., ထို့နောက်ပေါလု၏ဟောပြောခြင်းအမှုသည်အချည်းနှီးဖြစ်ပါတယ်. မသာကြောင်း, ဒါပေမဲ့ခရစ်ယာန်ရဲ့ယုံကွညျခွငျးကိုအချည်းနှီးဖြစ်ပါတယ်. ငါသည်အဘယ်သို့အတွက်ယုံကြည်ပါ၏, ယေရှု၏ဇာတ်လမ်းကောင်းတစ်ဇာတ်သိမ်းရှိသည်မဟုတ်ပါဘူးဆိုရင်? သာသတင်းဆိုးရှိပါတယ်. ငါအပြစ်ရှိသောသူရယ်, ယရှေုသညျအကြောင်းတစ်ခုခုလုပ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့, သို့သော်လည်းအဆုံးသည်သေခြင်း၌သူ့ကိုတယ်
ဧဝံရှိပါတယ်! အဆိုပါသတင်းဟုတ်မှန်သည်. ငါတို့သည်ဘုရားသခင်၏ပြန်ရနိုင်. ငါသည်သင်တို့၏ပထမဦးဆုံးအနည်းငယ်ကျမ်းပိုဒ်ကိုဖတ်ချင် 1 ကောရိန္သု 15.
ယခုငါသည်သင်တို့ကိုသတိပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း, ညီအစျကို, ငါသည်သင်တို့အားဟောပြောသောဧဝံဂေလိတရား၏, သောသင်သည်ခံ, သငျသညျရပ်သော, နှင့်သောအားဖြင့်သင်တို့ကိုသိမ်းဆည်းနေပါသည်, သင်စကားလုံးမှအစာရှောင်ကြည်လျှင်သင်သည်အချည်းနှီးကိုယုံကြည်မဟုတ်လျှင်သင်ငါဟောပြော. ငါလည်းလက်ခံရရှိသောအရာကိုပထမဦးဆုံးအရေးပါမှု၏အဖြစ်သငျသညျမှကယ်နှုတ်တော်မူ၏အကြောင်းမူကား: ခရစ်တော်သည်ကျမ်းစာလာသည်နှင့်အညီအကြှနျုပျတို့၏အပွစျမြားအဘို့အသေခံ, သူ၌သင်္ဂြိုဟ်ခဲ့, သူကမျြးစာကိုနှင့်အညီသုံးရက်မြောက်သောနေ့၌ထမြောက်စေတော်ခဲ့ကွောငျး, နှင့် က qသူကဖေအားထငျရှား, တကျိပ်နှစ်ပါး. ထိုအခါသူတဦးတည်းအချိန်ထက်ပိုမိုညီအစ်ကိုငါးရာတို့အားထင်ရှား, အဘယ်သူကိုအများစုအသက်ရှင်သေးများမှာ, အချို့သောအိပ်ပျော်သော်လည်း. ထိုအခါသူဂျိမ်းစ်အားထငျရှား, ထို့နောက်အားလုံးတမန်တော်. လူအပေါင်းတို့၏နောက်ဆုံး, မွေးဖွားတဲ့အချိန်မတန်တအဖြစ်, သူသည်ငါ့ကိုဖို့လညျးထငျရှား.
1 ကောရိန္သု 15:1-8
ယရှေုသညျငါတို့အပြစ်များအတွက်အသေခံ. ထိုမင်းသည်ငါတို့အပြစ်ကြောင့်အထ. ဒါကဧဝံဂေလိတရားကိုဇာတ်လမ်းရဲ့အစိတ်အပိုင်းရဲ့. ဒါကဆိုးသောသူတို့အဘို့ကြီးသောသတင်းင်.
ယရှေုသညျဘုရားသခငျနှငျ့ ပတျသကျ. မိမိနှင့် ပတ်သက်. ကသေလွန်သောသူတို့သည်ထောက်ခံအရာအားလုံးကိုမှထသောအချက်. ဒါကအဘယျသို့တံဆိပ်ခေါင်းများကသူ့ message ကိုဖွင့်. ဒါကဘယ်ယုံကြည်ခြင်းကိုအဘယ်သူမျှမကအခြားခေါင်းဆောင်သို့မဟုတ်အလိုတခုတည်းဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်သောပြောဆိုချက်ကိုင်.
သင်ဤသတင်းကြောင့်ပင်အစိတ်အပိုင်းစစ်မှန်တဲ့မပါလျှင်သူကပြောပါတယ်ကြောင့်ပေါလုအားအလှနျအရေးကွီးကွောငျးကိုမြင်, ထို့နောက်မိမိအဟောပြောခြင်းအမှုသည်အချည်းနှီးဖြစ်ပါတယ်. သငျသညျတနင်္ဂနွေမှသွားအသင်းတော်ကိုစဉျးစားကွညျ့. ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းစစ်မှန်တဲ့မကြီးဘူးဆိုရင်သောသူအပေါင်းတို့သည်မိမိတို့ဟောပြောခြင်းထိခိုက်မယ်လို့? သင်ပင်အသေခံခြင်းနှင့်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းခရစ်တော်နှင့်အဘယ်သို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာသက်ဆိုင်အကြောင်းကိုနားကြားပါနဲ့?
ဤသည်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းသင်၏အသက်တာလျှောက်ထားပါဘူး. ဘဝခက်ခဲသောကြောင့်ထိုသို့သင်တို့အဘို့အအရေးပါ. အပွစျမြားကိုမှန်ကန်များမှာ. အနာရောဂါက. သခွေငျးတရားကိုမှန်ကန်ဖ​​ြစ်ပါသည်. ငါတို့အဘို့အဆိုကောင်းသောသတင်းရှိပါသလား? အဘယ်သူသည်အဆုံး၌အနိုင်ရ? ကောင်းသောသတင်းရှိပါသည်. ယေရှုသည်သေခြင်းမှထမြောက်. ထိုမင်းသည်ခပ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုအသစ်လုပ်မယ့်. အဆိုပါအချည်းနှီးသောသင်္ချိုင်းကသူ့ကတိတော်စကားမှန်ဖြစ်ကြောင်းသက်သေပြ.
II ကို. ခရစ်တော်သည်သေခြင်းမှထမြောက်စေဘဲနေလျှင်, အဘယ်သူမျှမခွင့်လွှတ်ခြင်းလည်းမရှိ
ငါခွင့်လွှတ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်. အချို့သောကျပန်းသီချင်းစာသားဖတ်သွားပေါ့.
"သခင်ကသူ့ကိုခွင့်လွှတ်, သူ၌သူတို့ကိုမှောင်မိုက်တပ်ဖွဲ့များတယ် / ဒါပေမဲ့သူလည်းအပြစ်အဘို့ဖြောင့်မတ်အကြောင်းမရှိတယ်။ "
"သခင်သည်ငါ့ sinnin သည်ငါ့ကိုခွင့်လွှတ်ပါလော့ / 'ငါချောတယ်ဟုသည်မဟုတ် / သို့သော်လည်းငါသည်ကြိုတင်ဆုတောင်းတာပါ / သူမ၏မျက်စိသူတို့သည်ငါ၏ဘောင်းဘီကစားတူ glance လမ်းကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။ "
ဂျေကိုးလ်, အဆိုပါနွေးထွေးတဲ့ Up ကို
"ငါငါဖန်ဆင်းတိုင်းမကောင်းတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက် / ငါဆဲယနေ့တိုင်အောင်အကြောက်လွန်ရောဂါရယ် / ကငါ / ငါရှေးခယျြခဲ့အသက်သည်ဖန်ဆင်းဆုံးဖြတ်ချက်များကိုဖန်ဆင်းဘယ်သူမှရဲ့အပြစ်ပဲ / အကြောင်းမရှိကစားတိုင်းအစ်မများအတွက် / အပြစ်မှလွှတ်တာပါဆုတောင်းပဌနာ, သို့မဟုတ်အစား, ငါ့ကိုအရှေးခယျြခဲ့ကွောငျးသကျ "
Jay-Z, ဒီဇင်ဘာလတွင် 4th
"ငါကွဲပြားတာကဟန်ဆောင်ဖို့ကြိုးစားပေမယ့်အဆုံး၌အကြှနျုပျတို့ငါဘုရားကိုဆုတောင်းပဌနာ / အားလုံးအတူတူပင်နေ, ဖခင်ငါ့ပြောင်းလဲမှုကိုဘယ်တော့မှရယ်တစ်ဎ **** ခွင့်လွှတ်။ "
"ငါသည်အပြစ်ရှိသောသူဖွစျပါ၏, အဘယ်သူသည်ဖြစ်နိုင့်အပြစ်တရားရဲ့နောက်တဖန် / ထာဝရဘုရားသည်ငါ့ကိုခွင့်လွှတ်, သခင်ဘုရားသည်ငါနားမလည်အရာများအတွက်ငါ့ကို / ခွင့်လွှတ်။ "
လူတိုင်းသည်ခွင့်လွှတ်ခြင်းတန်ဖိုးထား. သူတို့ကအမှန်တကယ်ပြောင်းလဲနေတဲ့အပေါ်ရည်ရွယ်မရှင်းလင်းသောနေသောတောင်မှယောက်ျားတွေ. လူတိုင်းသည်အပြစ်မှလွှတ်ခံရဖို့လိုလား.
စုံလင်သောင့်တဲ့သူကဒီမှာရှိပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးမျှမရှိင်. ကြှနျုပျတို့အားလုံးမစုံလငျဖြစ်ကြပြီးကျွန်တော်ကိုပြစ်မှား. သိန်ထိုကဲ့သို့သောလူကြိုက်များစကားလုံးမဟုတ်ပါဘူး. ကျွန်တော်တို့ဟာတစ်ခါတစ်ရံတွင်အပြစ်အနာအဆာများကဲ့သို့ပျော့ပြောင်းပြီးစကားသည်ပိုနှစ်သက်, သို့မဟုတ်အပြစ်အနာအဆာ, သို့မဟုတ်အမှားတွေကို, ဒါပေမယ့်စကားလုံး "အပြစ်တရား" အဲဒီတစ်နည်းထက်ပိုတိကျတဲ့အရာတစ်ခုခုဆက်သွယ်. ကဆိုလိုသည်အပြစ်တရားအကြောင်းကိုတဲ့အခါကျမ်းစာဟောပြောချက် သင့်ရဲ့လုပ်ရပ်တွေကိုနှငျ့ဘုရားသခငျမနာခံ, သင်၏စကား, သို့မဟုတ်သင်တို့၏အကြံအစည်. ဒါဟာအမှတ်အသားပျောက်ဆုံးင်, ဘုရားသခငျသညျအဘယျသို့လိုအပ်ပါတယ်၏တိုတောင်းသောကျဆင်း, မှားအမှတ်အသားမှာရည်မှန်း, ဘုရားသခငျသညျဆန့်ကျင်ပုန်ကန်.
ထိုအခါကမျြးစာကိုအပွစျမြားရုံကျပန်းကျိုးပဲ့သောစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများမဟုတ်ကြောင်းပြောပါတယ်, ဒါပေမဲ့အပြစ်ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်မှာတိုက်ရိုက်ရည်ရွယ်မနာခံမှုဖြစ်ပါသည်. ဘုရားသခငျသညျကိုယျတိုငျကိုအပြစ်ဖြေရာကြာ, သူနှင့်သူ၏ကောင်းမြတ်ခြင်းအပေါ်တစ်ဦးပုဂ္ဂိုလ်ရေးတိုက်ခိုက်မှုအဖြစ်, ဉာဏ်ပညာကို, နှင့်ဘုန်းအသရေ. ထိုနည်းတူသင်တို့ကိုချသငျ့အိမျမီးလောငျသူတစ်ဦးဦးကိုယူချင်ပါတယ်, သင့်အိမ်၌တခုတခုအပေါ်မှာတိုက်ခိုက်မှုအဖြစ်မသာ, သင်မူကားအပေါ်ကိုယ့်ကိုယ်, ဘုရားသခင်သည်သူ့ကိုတစ်ဦးတိုက်ခိုက်အဖြစ်သူ၏ဖန်ဆင်းခြင်းအားဖြင့်ဆိုမနာခံမှုကြာ. သူပိုင်ဆိုင်ပါဘူးဘာမှမရှိဘူးင်. သိန်ကောင်းတစ်ဦးဘုရားသခငျသညျဆန့်ကျင်တဲ့ရာဇဝတ်မှုဖြစ်ပါတယ်. ထိုအတူညီသညျဘုရားသခငျကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာရပ်ပါလိမ့်မယ်သူကတရားသူကြီးကြောင်း.
ဒီနေရာတွင်အဘို့အကြှနျုပျ၏မေးခွန်းရဲ့: သငျသညျသူတို့အားအပွစျမြား၏ခှငျ့လှတျခံရဖို့မျှော်လင့်ထားပါနဲ့? အဘယ်ကြောင့်? အဘယ်ကြောင့်ကောင်းတစ်ဦးတရားသူကြီးကအစဉ်အဆက်အပြစ်တရားကဲ့သို့သောရာဇဝတ်ခံထိုက်သောအပြစ်ရှိ၏များအတွက်ချိတ်ကိုချွတ်သည်အပြစ်ရှိသောသူတို့ကိုပါစေလိမ့်မယ်? ဒါကြောင့်ပြီးသားများအတွက်ပေးဆောင်ခဲ့င်လျှင်ကောင်းပြီဘုရားသခငျသညျအပွစျကိုခှငျ့လှတျသောတစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်. အစဉ်အမြဲအပြစ်အတွက်ပေးဆောင်ဖို့အခိုင်အမာသူတစ်ဦးတည်းသာရှိရဲ့, ယရှေုသညျ. ယေရှု၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကငွေပေးချေမှုကိုလက်ခံသောအထောက်အထားသည်.
ယရှေုသညျထမြောက်တော်မမူလျှင်အကြောင်းပေါလုကဖျောပွအရာတစျခုဖွစျသညျ: "သင်၏ယုံကြည်ခြင်းကိုအချည်းနှီးဖြစ်ပါတယ်သင်သည်သင်၏အပြစ်၌နေဆဲပါ။ "
ကသင်၏အပြစ်များအတွက်ဖြစ်ဖို့ကိုဆိုလိုတယ်အဘယျသို့, သငျသညျသူတို့အဘို့အဆပ်ဖို့ရှိသည်ဆိုသောအချက်ဖြစ်ပါသည်. ဒါဟာသူတို့သည်သင်တို့စံချိန်အပေါ်နေဆဲပါပဲဆိုလိုသည်. ဒါဟာသူတို့ကိုသင်ဖို့ကျွန်ခံနေဆဲပါပဲဆိုလိုသည်. ဒါဟာသူတို့ကိုသင်အထဲကနှုတ်ယူကြပြီမဟုတ်ဆိုလိုသည်. ဒါဟာသင်ထိုသူတို့အဘို့အပြစ်လွတ်မည်မဟုတ်ပါဆိုလိုသည်. အပြစ်လွှတ်ခြင်းသညျယရှေုခရစျ၏ပကတိကိုယ်ထင်ရှားရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းအပေါ်အရင်း.
ယရှေုသညျအပွစျကိုကူးအောင်ပွဲကိုခံဘယ်မှာလက်ဝါးကပ်တိုင်ဖြစ်ပါသည်. ဒါကအပြစ်နဲ့ဘေးဥပဒ်နှင့်ဆိုင်ပြိုင်တိုက်လှန်ပွဲစဉ်တူရဲ့. ယရှေုသညျထမရခဲ့လျှင်, အပြစ်ဝမ်ဆိုလိုသည်.
တခြားဘာသာတရားအပြစ်လွှတ်ခြင်းနှင့်အတူတာမလုပ်ကြပါဘူး. ကောင်းတစ်ဦးတရားသူကြီးကသူတို့ကိုလစျြလြူရှုမယ်လို့အဘယ်ကြောင့်အဘယ်သူမျှမရှင်းပြချက်ရှိပါတယ်. ကောင်းကင်သို့ရယူခြင်းမကောင်းတဲ့ထက်ပိုပြီးကောင်းသောအကျင့်ကိုကျင့်သည်, ဒါပေမဲ့ဘာမကောင်းတဲ့အကြောင်း? သူတို့ကလာမယ့်နေ့ကလမ်းပေါ်မှာဖြတ်ပြီးဟောင်းအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကကူညီပေးခဲ့သောကြောင့်, ကျွန်တော်တို့ကိုအဘယ်သူမျှချိတ်ကိုချွတ်လူသတ်သမားများကြကုန်အံ့သူတစ်ဦးတရားသူကြီးကချီးမွမ်းမယ်လို့. အပြစ်အတွက်ပေးဆောင်ခံရဖို့ရှိပါတယ်.
သင်သည်သင်၏အပြစ်၌ဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌ရပ်နေချင်ကြပါဘူး. သငျသညျဖွစျနိုငျနှစ်ခုသောနေရာများရှိပါသည်, ခရစ်တော်အတွက်သို့မဟုတ်သင့်အပြစ်၌.
ယရှေုသညျကွောငျ့, အရူးဘာသာရေးအမျိုးအစားတွေအများကြီးလုပ်, သူကလူအနာပျောက်စေနိုင်သောခဲ့မသာ, ဒါပေမဲ့သူကသူတို့ရဲ့အပြစ်ကိုလွတ်စေပြီသူတို့ကိုပြောပြခဲ့. ယရှေုသညျအပွစျမြားကိုခှငျ့လှတျဖို့အခွင့်အာဏာခဲ့. အဆိုပါပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးကအခွင့်အာဏာရှိသည်ပါဘူး, သင်းအုပ်ဆရာကအခွင့်အာဏာရှိသည်မဟုတ်ကြဘူး, ယဇ်ပုရောဟိတ်က authority- သာဘုရားသခင့ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူး. ယရှေုသညျဇာတိပကတိ၌ဘုရားသခင်ခဲ့သည်.
ရဲ့စကားလုံးခွင့်လွှတ်ခြင်း၏သဘောကြစေ. ငါ့မိတ်ဆွေမျက်နှာ၌ငါ့ကိုရိုဆိုရမည်. ငါကအိုကေရဲ့ကပြောသည်လျှင်ကြောင့်ခွင့်လွှတ်ခြင်းမဖြစ်လိမ့်မယ်, ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒါဟာအဘို့သူ့ကိုနောက်ကျောပါးပဲရိုက်စီစဉ်ထား. ခွင့်လွှတ်ခြင်းပဲငါသည်သူ၏တောင်းပန်မဆိုလိုပါ, သူငါ့ကိုပြစ်မှားဘ​​ူးလျှင်ကြောင့်သူ့ကိုငါလိုဆကျဆံခွငျးကိုဆိုလို. သူမြင့်မားသောငါးအဘို့အဝင်သည့်အခါတိုင်းယခုငါစိတ်ဒဏ်ရာနဲ့ဘဲစေခြင်းငှါ. သူ့ကိုငါတူမကိုးစားစေခြင်းငှါ, ဒါပေမယ့်ငါသူ့ကိုဆန့်ကျင်အပြစ်ကိုင်မည်မဟုတ်. ငါနောက်ကျောသူ့ကိုရဖို့မကြိုးစားပါလိမ့်မယ်, သို့မဟုတ်သူ့ကိုဆီသို့ဦးတည်ခါးသီးဖြစ်. ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးကိုပွနျလညျထူထောငျနိုငျ.
သိန်သညျဘုရားသခငျဆန့်ကျင်နေတဲ့လေးနက်သောပြစ်မှုသည်. ဒါဟာသူ့ကိုရန်ဒါအလေးအနက်င်, သူ့ကိုသူကလျစ်လျူရှုမှာမဟုတ်ဘူးလို့. သူကအပြစ်ပေးခံရဖို့ခဲ့ရသည်ကိုသိ. တဖန်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုသူသညျယရှေုကိုစလှေတျနိုင်အောင်အများကြီးကိုခစျြ. ယရှေုသညျအကြှနျုပျတို့ကိုကသူသည်ငါတို့အဘို့လက်ဝါးကပ်တိုင်မှာပြစ်ဒဏ်ယူဖို့ဆန္ဒရှိခဲ့နိုင်အောင်အများကြီးကိုခစျြ. ဒါကလက်ဝါးကပ်တိုင်သည်အဘယ်သို့င်. ဒါဟာဆိုးသောသူတို့ထိုက်ကြောင်းယေရှု၌တက်လှမ်းလာခြင်းနှင့်ပြစ်ဒဏ်ယူပြီးဖွင့်.
ငါတို့သည်ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ကိုးစားတဲ့အခါမှာဘုရားသခငျသညျအကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူမိမိအကြားဆက်ဆံရေး restores. သူကကျွန်တော်တို့ရဲ့စံချိန်စင်ကြယ်သောသုတ်ပါလိမ့်မယ်. ဒါဟာအားလုံးဠာ၏တရားသူကြီးမှအပြစ်ရှိသည်မဟုတ်တစ်စီရင်ချက်င်. သူကသူနှင့်အတူဆကျဆံရေးကျွန်တော်တို့ကိုလကျခံပါလိမ့်မယ်. သူကကျွန်တော်တို့ကိုဆန့်ကျင်ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များကိုကိုင်ထားမည်မဟုတ်.
ရောမ 4:7-8 ကပြောပါတယ်, "မင်္ဂလာရှိသူ၏ဥပဒေမဲ့အကျင့်ကိုအပြစ်မှလွှတ်ကြသည်သူတို့သည်ပညာမရှိကြ, အဘယ်သူ၏အပြစ်ကြောင့်အဖုံးအုပ်; မင်္ဂလာရှိသောထာဝရဘုရားသည်မိမိအပွစျကိုရေတွက်မည်မဟုတ်ဘယ်သူကိုဆန့်ကျင်သူဖြစ်၏။ "
သင်၏အပြစ်များအတွက်ဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌ရပ်ထက်ဠာ၏အားလုံးထဲ၌နောက်တဖန်မကွောကျစရာကောငျးအရာရှိပါသည်. သို့ရာတွင်အဘယ်သူမျှကြီးမြတ်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာရှိသမျှတို့ကိုစကြဝဠာထဲမှာရှိပါတယ်, ဘုရားသခင်ကအပြစ်မှလွှတ်ခံရဖို့ထက်.
ခဏခဏ, ခရစ်ယာန်တွေဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုဖြောင့်မတ်ဖြစ်ခြင်း၏တခြားသူတွေနဲ့တစ်ဦးဂုဏ်သတင်းရှိ. ထိုအခါငါကကြေကွဲဖွယ်င်ထင်. ခရစ်တော်ယုံကြည်ကိုးစား၏အဓိပ္ပါယ်မိမိကိုယ်ကိုဖြောင့်မတ်အတိအကျဆန့်ကျင်ဘက်သောကြောင့်,. ဒါဟာကျနော်တို့မျှဖြောင့်မတ်ဝန်ခံင်. ယုံကြည်ခြင်း၌ဘုရားသခင်ကြွလာ, သူငါတို့၏မတရားသောအမှုသည်ကိုခွင့်လွှတ်မယ်လို့. ဒါကြောင့်ခရစ်ယာန်များသည်သင်တို့အားယုံကြည်ခြင်းတရားကိုအတုလျှင်, သူတို့နှင့်အတူမသနားတျောမူဖြစ်. ဒါကခရစ်တော်ဆုံးမသွန်သင်သောအရာကိုမင့်
သင်သည်တာရှည်သင်၏အပြစ်များ၏အပြစ်ကိုလွှတ်တော်မူခံရဖို့ပါနဲ့? ငါသည်သင်တို့သင်၏အသက်တာကိုစဉ်းစားရန်လိုခငျြ. မဖြောင့်နေသောငါတို့သည်ပြုမိပါဘူးအရာများစွာကိုရှိပါတယ်. ကျနော်တို့လိမ်ညာင်, ကျွန်တော်တပ်မက်ပါဘူး. ကျွန်တော်တို့ကိုအတော်များများ fornicated နှင့်ယစ်မူးကိုဆည်းပူးခဲ့ကြ. ကျွန်တော်တို့ကိုအတော်များများအခိုးခံရခြင်းနှင့်လိမ်လည်လှည့်ပြီ. ကျွန်တော်တို့ကို၏အခွားသူမြားစှာကိုမုန်း, ကျွန်တော်တို့ပျင်းရိနေ, နှင့်စာရင်းအပေါ်သွားနိုင်. ကြှနျုပျတို့အားလုံး. ကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာတစ်ဦးသည်သန့်ရှင်းသောဘုရားသခငျသညျမှားယှငျး. သင်သည်တာရှည်သောသူတို့၏အပွစျမြား၏ခှငျ့လှတျခံရလျှင်ထိုအခါငါတွေးမိ.
ဧဝံဖြစ်ပါသည်, ကခွင့်လွှတ်ခြင်းယေရှုခရစ်၌ရရှိနိုင်. ဒါပေမယ့်သူအမှန်တကယ်ကိုသေခြင်းမှထမြောက်မှသာလျှင်. ထိုအခါမှသာ, ကျနော်တို့အသက်တာ၌ယုံလျှင်, သေဆုံးခြင်း, ယေရှု၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်း.
III ကို. ခရစ်တော်ပေါ်ထွန်းစေဘဲနေလျှင်, အဘယ်သူမျှမထာဝရအသကျရှိ
ကျွန်တော်တို့ကိုအမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှတစ်ခုတည်းတစ်သေခြင်းတရားအကြောင်းမှန်မဟုတ်ရဲ့အရာတစ်ခုခုရှိကွောငျးကိုသိ. ကျွန်တော်တို့အသုဘသို့သွားရသောအခါ,, piñatasနှင့် confetti ရှိပါတယ်ဘယ်တော့မှဖွင့်. အဲဒီမှာဝမ်းနည်းပူဆွေးင်. မျက်ရည်ရှိပါတယ်. ဝမ်းမြောက်သောစိတ်သူတို့၏ဘဝဆင်နွှဲရန်အဖြစ်ကောင်းစွာမကြာခဏရှိပါတယ်. ငါတို့မူကားသေခြင်းတရားကိုယ်တိုင်ကအကြောင်းစဉ်းစားသောအခါ, ပါဝင်ပတ်သက်ဝမ်းနည်းမှုတွေအများကြီးရှိပါတယ်. အသေခံမမှားသောကြောင့်,. ဒါဟာသဘာဝင်.
ငါတို့သည်သေမင်းမှဒါအသုံးအများဆုံးပါပဲ, ထိုသို့နှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန်ရုံတစျခုငါတို့သည်သူတို့အအချက်အလက်များ၏တူပုံ. သို့သော်ဤလွန်းဤလောက၌အပြစ်ရှိ၏သို့ဝင်ပြီးနောက်ဖြစ်ပျက်သောအရာတစ်ခုခုသည်. ကျွန်တော်တို့အပြစ်များသောသူနေသောကွောငျ့သခွေငျးတရားဖြစ်ပျက်. ဒါဟာညာဘက်မဟုတ်ပါဘူး. အကြှနျုပျတို့နက်ရ​​ှိုင်းသောစိတ်ပျက်လက်ပျက်၏ခဏရောက်နေမဟုတ်လျှင်, အသေခံဘို့အရှည်လျားကျွန်တော်တို့ကိုအဘယ်သူအားမျှ. ငါတို့သည်လည်းအသက်ရှင်ချင်.
သင်သေဆုံးသောအခါသင်တို့သည်ကောင်းကင်တာပေါ့ထင်ပါသလား? ကျွန်တော်တို့ကိုအတော်များများဟာကောင်းတဲ့နေရာတစ်ခုအဖြစ်ကောင်းကင်ဘုံ၏ထင်, ဘဝကျော်ပြီးမှငါတို့ဆွေမျိုးသားချင်းသွားဘယ်မှာ. အကြှနျုပျတို့ kinda ကျွန်တော်အဲဒီမှာ get မျှော်လင့်ပါတယ်. ထိုယူဆ, ငါတို့သည်သေပြီးနောက်ကြောင်း, သောဆုံးမင့်. ကောင်းပြီရှင်ပေါလုကပြောပါတယ်, ထမြောက်ရှင်ပြန်ခြင်းမရှိင်လျှင်, ထို့နောက်ဘာမှမရှိဘူး.
"ထိုအခါခရစ်တော်ကို ယုံကြည်. အိပ်ပျော်သောသူတို့သည်ဆုံးရှုံးခြင်းသို့ရောက်ကြပြီ. ခရစ်တော်အတွက်သာယခုဘဝ၌မြော်လင့်စရာရှိလျှင်, ကျွန်တော်တို့သနားခံရဖို့အများဆုံးလူအပေါင်းတို့၏ပါ။ "
သူတို့ကွယ်လွန်သွားခဲ့ကွောငျးကိုချစ်သောကြောင့်လူရှိခဲ့သည်, ကျွန်တော်တို့ကိုဆင်တူ. ပေါလုသည်ထိုသူတို့သေဆုံးတဲ့သူကိုသိခရစျယာအကြောင်းပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်. ယရှေုသညျမထခဲ့လျှင်ထိုပေါလုကပြောနေ, ထို့နောက်သူတို့ပဲပျောက်ပျက်. သူတို့ကအမှုကိုပြုပါတယ်. ဘုရားသခင်နှင့်အတူအဘယ်သူမျှမထာရှိတယ်.
ထိုမင်းသည်ဆိုပင်နောက်ထပ်ဝင်, သငျသညျကိုသနားခရစ်ယာန်တွေကိုသင့်. သငျသညျကြှနျုပျတို့အတှကျအမကောင်းတဲ့ခံစားရသင့်တယ်.
သင်ရုံတခါတရံကျပန်းဘုရားကျောင်းသွားတဲ့အရာအဖြစ်ခရစ်ယာန်ဘာသာ၏ထင်တဲ့သူအခုလူအများစု, နှင့်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးသင်တို့သည်သခင်ဘုရားရဲ့ဆုတောင်းပဌနာကိုအောကျမေ့, ရှင်ပေါလုသည်ဤဆိုအဘယ်ကြောင့်နားမလည်ကြဘူး. သူတို့၏စိတ်တွင်သောကြောင့်, ခရစ်ယာန်တွေကိုတကယ်ဆုံးရှုံးနေသောတစ်ခုတည်းသောအရာတနင်္ဂနွေသည်. ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်အောက်ပါအများကြီးပိုပါတယ်.
ခရစ်တော်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အလုံးစုံတို့အဘို့ကိုခေါ်. သူကအရာရာကိုတောငျး. သူကကျွန်တော်တို့ကိုချကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာမှားယွင်းကြောင်းကိုမေးတယ်. ငါတို့သည်ငါတို့၏လက်ဝါးကပ်တိုင်ကိုတက်ယူကြောင်း. ငါတို့သည်သူ့ကိုအလှည့်ပတ်ကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာကိုတည်ဆောက်ဒါက. ထိုမင်းသည်အမှန်တကယ်ဖွင့်မရခဲ့လျှင်, ကျနော်တို့မိုက်ပါတယ်. မသနားကျွန်တော်တို့ကို. ကျွန်တော်ပြုမိပါတယ်အားလုံးစရာအကြောင်းမရှိဘို့ငါတို့ဘဝတွေကိုပစ်သောကြောင့်,.
ဘုရားသခင်အဘို့ဤမျှကမ္ဘာပေါ်တွင်ကိုခစျြ, သူသည်မိမိအသာသားတော်ကိုပေးသော, အကြင်သူသည်သူ့ကိုယုံကြည်သောထာဝရအသကျပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်ပေမယ်ရှိသည်မဟုတ်သင့်ကြောင်း.
ထာဝရအသက်ကိုရရှိပါတယ်. သငျသညျထမွောကျစေနိုင်သည်. ထိုအခါဘုရားသခင်နှင့်အတူအစဉ်အမြဲအသက်ရှင်. ခရစ်ယာန်တွေကိုသနားခံရဖို့မရှိပါ. ခရစ်ယာန်တွေဟာသင်္ချိုင်းတွင်းကိုကျော်လွန်နေတဲ့မျှော်လင့်ချက်ရှိသောသူဖြစ်ကြ၏. သငျသညျသခွေငျးကိုကွောကျရှံ့ပါဘူးသူတစ်လူအားအဘယျသို့ပွုနိုငျ? ပေါလုသည်ဖိလိပ္ပိ၌ဤများစွာသောဥပမာဖြစ်ပါတယ် 1. ဒါကြောင့်သူကယေရှုနှင့်အတူဖြစ်သွားကြဖို့ရရှိသွားတဲ့ဆိုလိုသည်သောကွောငျ့သူသေမင်းနှင့်ဒဏ်ငွေင်.
အကျဥ်းရုံးသည်: ဟုတ်ကဲ့. ယရှေုသညျထလျှင်ကြောင့်အရေးပါ. ထိုအခါသူသည်တက်ရခဲ့. သူ၏ဇာတ်လမ်းသူကွယ်လွန်ကြောင်းအတွက်အခြားသူများအားဆင်တူသည်. လူတိုင်းကွယ်လွန်. သို့သော်လူတိုင်းမတက်ရရှိသွားတဲ့. ယရှေုသညျထ. ထိုမင်းသည်ကိုယ်တော်ကို၌ရှိကြ၏လျှင်လည်းတက်ရသူနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ရဲ့ထာဖြုန်းလိမ့်မည်ဟုကတိပေးထား. သငျသညျသူ့ကိုကိုးစားပြီ?
ပေါလုက • ဧပြီလ 18, 2014 တွင် 11:47 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်, သင်းအုပ်ဆရာ Lee က. “ယရှေုသညျဘုရားသခငျသညျ restore ကိုစလှေတျတျောမူသောတစ်ခုမှာဖြစ်ပါတယ်, နှင့်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖန်ဆင်းရှင်မှကျွန်တော်တို့ကို restore ရန်. ဒါကသတင်းကောင်းပါပဲ။” ဒါကကောင်းသောသတင်းဖြစ်ပါတယ်! အဆိုပါ confetti တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းငါ့ကိုရယ်မောလုပ်. သငျသညျတရားကိုဟောပြောသောအခါအသငျသညျဟာသတစ်မူထူးခြားတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှိ. အဲ့ဒါကောင်းတယ်.
အီဗန် • ဧပြီလ 18, 2014 တွင် 2:14 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
သငျသညျခရစ်ယာန်ဘာသာထားထူးခြားမှုကျွန်ုပ်တို့သေအသက်ရှင်လျက်မြင့်တက်ကြောင်းကယ်တင်သောသခင်များပြောနိုင်သူသာသူများဖြစ်ကြ၏သိရန်တခြားဘာသာတရားမှဒါနက်ရှိုင်းစွာထင်ဘယ်တော့မှ Love, သူကတကယ်ကဒီမှာသည်နှင့်ငါတို့အဘို့အရာအရပျသှားပွီးပွငျဆငျဖို့တစ်ချိန်တည်းမှာသွားပြီ
CynthiaAghomon • ဧပြီလ 18, 2014 တွင် 6:27 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ယရှေုသညျအမှန်ပင်အရာအားလုံးဖြစ်ပါသည်…မရှိခရစ်ယာန်ဘာသာသညျယရှေုမပါဘဲဖြစ်ပြီးအသက်သည်လည်းကားစင်တင်မပါဘဲအနတ္တနှင့်ကူကယ်ရာမဲ့ဖြစ်ရပြီလို, သေခြင်းနှင့်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်း. ကျွန်မမျက်စိတွေအများကြီးဒီဘုနျးကွီးသောဖြစ်ရပ်၏အမှန်တရားမှဖွင့်လှစ်ပါလိမ့်မည်ဆုတောင်းပဌနာ.
ဖေါ်ပြ: VulcanYouth » အီစတာပှဲတျော!!
JacobAlger • ဧပြီလ 20, 2014 တွင် 8:11 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
က Man ခရီးစဉ်, မျှဝေလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်. ဒီတစ်ခုအစွမ်းထက်သတင်းစကားဖြစ်ပါသည်. ငါဆိခဲ့ကတည်းကယုံကြည်သူဖြစ်ပေမယ့်ကိုယ့်ကိုကိုယ်ဒီကအရမ်းဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုပဲဒီအီစတာတောင်းဆိုနေတာတွေ့ပြီ. သင့်ရဲ့မက်ဆေ့ခ်ျကိုပေါလု၏သွန်သင်ချက်များကဒါရှင်းရှင်းလင်းလင်းစေသည်. ငါသည်သင်တို့၏နှလုံးနှင့်သင့်မက်ဆေ့ခ်ျကိုတန်ဖိုးထား, ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုငါ့ dude!
မာရီယိုတစ်ဦးက. Ramirez • ဧပြီလ 22, 2014 တွင် 4:04 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
DiDi • ဧပြီလ 22, 2014 တွင် 7:22 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
နှေးကွေးဖြစ်ခြင်းသည်ငါ့ကိုခွင့်မလွှတ်, ဒါပေမဲ့အခါသင်ဝါကွှားရန်တည်ဆောက်နိုင်ဖို့ငါ့သခင်အပေါ်ကြွားထံမှနာမည်ကိုပြောင်းခဲ့ပါ? လည်း, အီစတာ၏အချက်အပေါ်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အပိုင်းအစ!
TAREKcReSTIK • မေ 20, 2014 တွင် 8:27 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
Aye ခရီးစဉ်, မေးစရာရှိပါတယ်, ပသခါပွဲနှင့်သမ္မာကျမ်းစာပွဲတော်များအပေါ်သင်တို့၏အကြံအစည် whatre?
Greg • နိုဝင်ဘာလ 3, 2014 တွင် 7:58 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ငါဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်၏သင့်ခွဲဝေမှုအဘို့ဤမျှလောက်ကျေးဇူးတင်မိပါတယ်! ဒီ post ကျနော်တို့မှာအများကြီးငါ့ကိုအားပေး. ဒါဟာသညျယရှေုကိုစောင့်ရှောက်ရန်စူပါခက်ခဲ့မယ့်’ ကြှနျတေျာ့စိတျရှေ့မှာအောင်ပွဲ. ဒါဟာငါ့အစ်ကိုကတည်းကတစ်နှစ်နီးပါးဖြစ်ရဲ့ 17 yrs သေဆုံးခဲ့. တစ်ဦးကို flash ထဲမှာဘုရားသခင်ကိုဖြစ်ပျက်ကြပါပြီဘယ်တော့မှသင့်ကြောင်းစုစုပေါင်းမတော်တဆမှုသလိုပဲသောအရာကိုတဆင့်သူ၏အသက်တာကိုယူ. သူ့ကိုငါနှင့်အတူဤမျှလောက်အချိန်ကြာအောင်; ကြှနျတေျာ့ဘဝတစျခုလုံးအစဉျအမွဲအကြီးမားဆုံးလမ်းအတွက်ပြောင်းလဲခဲ့သည်–ငါသူအစဉ်အဆက်ခဲ့တယ်ထက်အသက်ကြီးဖြစ်ခြင်းအပေါ်ကိုတက်လာမယ့်တာကြောင့်ယုံကြည်ရန်ခက်ခဲပါကဖွင့်. ငါသည်နောက်တဖန်သူ့ကိုမြင်ရပါလိမ့်မည်? သူထမည်?
ငါဒါကြောင့်သင့်သီချင်းခြင်းဖြင့်အားပေးအားမြှောက်သောကြောင့်ငါသည်ဤ post ကိုဆီသို့ရောက် လာ. , “လာဇရုကို။” သငျသညျအကြှနျုပျကိုဤမျှလောက်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာပါတယ်, ငါသောလေးနက်အမှန်တရားမျှဝေမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရန်ရှိသည်, ယရှေုသညျသခွေငျးကိုကျော်အောင်ပွဲအတွက်ကြီးပြင်းသောကြောင့်,, ငါကိုယ်တော်မျက်နှာချင်းဆိုင်မြင်ရပါလိမ့်မည်ဖြစ်ကြောင်းကိုသိရ…အရမ်းနှင့်ငါ့အစ်ကို. ငါသည်သင်တို့ကိုလည်းအားပေးအားမြှောက်နေမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်!
ဖေါ်ပြ: la Sagrada Familia, #CrossEqualsLove | Kween
Sammy • အောက်တိုဘာလ 15, 2016 တွင် 11:34 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ရှိသမျှသည်အခြားသောအနာဂတ္တိကျမ်းသူတို့ခြောက်ပေနက်ရှိုင်းသည် သွား. အစဉ်အဆက်ကတည်းကနေ့၏အလင်းကို မြင်ရ. ဖူးဘူး ….
500 မျက်မြင်သက်သေများကြည့်ရှုမှတ်သား grossly ဖို့တစ်ခုခုမဟုတ်ပါ … Jay Z သေသုံးရက်အကြာမှာသူပြန်သေခြင်းမှတို့သည် လာ. ကဲ့သို့သော bloke ပြောပါ !!!!
မီဒီယာ washout ကြီးမားခြင်းမရှိပါလိမ့်မယ်???
သို့သော်ဖြစ်နိုင်ခြေဘာတွေလုပ်နေလဲ 500 အဲဒါကိုလှစ်ဟပြလိုက်သလို pepo ဤဖြစ်ရပ်ကိုသက်သေခံလိမ့်မယ် ???
JNote • မေ 3, 2017 တွင် 1:07 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ခရီးစဉ်သည်လူ, ဘုရားသခင်သင့်ကိုကောင်းချီးပေးပါစေ! သင့်ရဲ့တရားဒေသနာနှင့်သွန်သင်ချက်နှင့်ဂီတကိုနားထောင်ခြင်း, ကျိန်းသေငါ့ကိုချီအမိန့်ရုပ်သိမ်းပြီ. ထိုကောင်းမွန်သောသတင်း, ဧဝံဂေလိတရားကို, လူကိုပိုပြီးမကြာခဏထွက်နထေိုငျဖို့လိုအပျတစ်ခုခုရဲ့နဲ့ကျွန်မသင်ကလူကိုလုပ်နေတာကြည့်ဖို့ဝမ်းသာတယ်. ဘုရားသခငျသညျသငျသညျကိုအသုံးပြုလမ်းကိုကြည့်, ကျနော်တို့အတူတူပင်ပစ္စည်းပစ္စယတွေအများကြီးလုပ်ပေးကတည်းကငါ့ကိုအများကြီးကူညီပေးသည်, ဂီတနှင့်ဓမ်မအမှု၌, ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်သည်လူမှဟုတ်ဟုစောင့်ရှောက်, ငါသည်သင်တို့အဘို့ဆုတောငျးလတာ.